တောင်ကိုရီးယားအကောက်ခွန် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | တောင်ကိုရီးယား, ယဉျကြေးမှု
အခုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြာလိမ့်မယ်၊ တောင်ကိုရီးယား ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၏ကမ္ဘာ့မြေပုံတွင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူ၏ဂီတစတိုင်အတွက်ကျော်ကြားသည် K-Popနှင့်နှင့်များသောအားဖြင့်ခေါ်သူတို့၏ဆပ်ပြာအော်ပရာသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး ကိုရီးယား။ နှစ် ဦး စလုံးကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းယူနှင့်နေရာတိုင်းသစ္စာရှိပရိသတ်တွေရှိသည်။
ဂျပန်ရုပ်ပြနှင့်ကာတွန်းရုပ်ပြများကကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျပန်နှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုမကြည့်မီကြာမြင့်စွာကပင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်နေသောအာရှနိုင်ငံမှာတောင်ကိုရီးယားဖြစ်သည်။ လူတော်တော်များများသည်ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုစတင်လေ့လာခြင်း၊ ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်များ၏ဘဝနောက်ကိုလိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုစျေးကွက်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် Fordism ရုပ်မြင်သံကြားစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော အချိန်မှစ၍ တစ်ပြိုင်တည်းစီးရီးကိုစားသုံးကြသည်။ တကယ့်အောင်မြင်မှုပါတကား။ ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်ရအောင် တောင်ကိုရီးယားအကောက်ခွန်
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၏တောင်ဘက်စွန်းတွင်သူတို့သည်နီးပါးနေထိုင်ကြသည် 51 လူဦးရေသန်း ကိုရီးယားစစ်ပွဲအပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကမြောက်ကိုရီးယားမှသူတို့၏အစ်ကိုများနှင့်ကွဲကွာခဲ့သည်။ တရား ၀ င်တရားဝင်စစ်ပွဲတွင်ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတစ်ခုသာရှိသည်။ သို့သော်နှစ်ဘက်စလုံး၏ဖြစ်ရပ်မှန်များသည် ပိုမို၍ ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တောင်ဘက်တွင်အရင်းရှင်များ၏ပင်လယ်ဖြစ်သောကြောင့်မြောက်ဘက်တွင်ကွန်မြူနစ်များဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်မြူနစ်နိုင်ငံအနည်းငယ်ထဲမှတစ်နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အခြေခံအားဖြင့်ဒီနေရာမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကအချက်ကမိသားစု၊ စီစဉ်ပေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတော်လေးဘုံဖြစ်ကြသည် နေဆဲ, အရာဖြစ်၏ macho လူ့အဖွဲ့အစည်း နှင့်ကလေးများအကြားအထီးအမြိုးသမီးတကျော်သာ။ လွှမ်းမိုး။ ပညာရေးအဆင့်သည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂျပန်၌ကဲ့သို့ပင်ကိုရီးယားဘာသာစကားသည်လူမှုရေးကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကောင်းစွာမှတ်သားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြီးထွားလာသော်လည်းအမျိုးသမီးများ၏နေရာသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတန်းတူအဆင့်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ သူတို့ထဲကတစ်ဝက်နီးပါးအလုပ်လုပ်ပေမယ့် 2% သာပါဝါရာထူးယူကြောင်းမှန်သည်။
la ရိုသေ ၎င်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှုတ်ဆက်သည့်ရိုးရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါသင်ပထမ ဦး ဆုံးမိသားစု၏အမည်ကိုပြောရမည်။ ဒါ့အပြင် တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား surname အားဖြင့်ခေါ်ဆိုဘုံဖြစ်ပါတယ် လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၆၀ ကအနောက်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအမည်နှင့်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒီဂရီ၊ ရှေ့နေ၊ ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုခုရှိပါက၎င်းကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
သင်သည်နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုပါက၊ အခမဲ့လက်ကအခြားတစ်ဖက်ကိုအနားယူသင့်သည်။ သငျသညျအမြိုးသမီးတဖြစ်လျှင်, သငျသညျဝေးရရုံတင်နိုင်။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းပါတယ်။
ဂျပန်လိုကိုရီးယားတွေလိုပဲ သူတို့ကငြင်းတာကိုမုန်းတယ်။ သူတို့အတွက်ခက်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အကြိမ်တစ်ထောင်လှည့်ပတ်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဆွေးနွေးမှုများသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးမှုများသည်ကြာရှည်စွာတည်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာတိုက်ရိုက်လူတွေပဲ။
ကိုရီးယား သူတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားမဟုတ်ပါ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားမပြောသင့်ဘူး။ ကျနော်တို့ကပွေ့ဖက်တယ်၊ အများကြီးထိတယ်၊ သူတို့ကအတော်လေးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ၊ ဒါဟာသူတို့ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေရာပေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သူတို့ကလမ်းပေါ်မှာဝင်တိုက်လျှင်သူတို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့်မြို့ကြီးများမှာစိတ်မ ၀ င်စားပါနဲ့။
မင်းတွေ့ရင် ယောက်ျားလက်မောင်းအတွက်လက်မောင်းသွား ဒါမှမဟုတ်မိန်းကလေးတွေအတူတူတူပဲ၊ သူတို့ဟာလိင်တူချစ်သူလား၊ လိင်တူဆက်ဆံတာကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူး၊
ကိုရီးယား လက်ဆောင်တွေဖလှယ်ရမယ် ပိုက်ဆံတောင်မှ။ သငျသညျတ ဦး တည်းကိုလက်ခံရရှိရန်လုံလောက်သောကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အသုံးပြုရန်သတိရပါ ဒါကြောင့်ယူနှစ် ဦး စလုံးလက် သင့်အားပေးသောသူသည်မထွက်မှီတိုင်အောင်မဖွင့်နှင့်။ သူတို့ရှေ့မှောက်တွင်ထိုသို့ပြုခြင်းသည်ရိုင်းစိုင်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးမည်ဆိုပါက၊ မှောင်မိုက်သို့မဟုတ်အနီရောင်စာရွက်များကိုမရွေးပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တောက်ပသောအရောင်များကိုသွား။ လက်ဆောင်တစ်ခုယူဆောင်လာသင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်သင့်ကိုအိမ်တစ်လုံးသို့ဖိတ်ကြားလျှင်၊ ကမ္ဘာ၏ဤအခြမ်းမှစပျစ်ဝိုင်ကိုယူဆောင်လာလျှင်သူတို့သည်စတိုင်ဖြစ်သည် သကြားလုံး, ချောကလက်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်။ သူတို့ကအရက်မူးနေပေမဲ့အရက်မသောက်ဘူး၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီလက်ဆောင်ကစျေးမကြီးသင့်ပါဘူး။
သငျသညျ may အိမ်ထဲဝင်တဲ့အခါဖိနပ်ကိုချွတ်လိုက်ပါ ကိုရီးယား၏။
မကောင်းသောအရာအဖြစ်မမြင်ဘဲခွင့်ပြုထားသောအများဆုံးနှောင့်နှေးမှုသည်နာရီဝက်ဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်တိကျ ပိုကောင်း။
သင် you ည့်သည်ဖြစ်လျှင်သင်သည်အစားအစာသို့မဟုတ်သောက်ရန်သင့်ကိုဘယ်တော့မှမကူညီသင့်ပါ။ သင်၏အိမ်ရှင်သည်သင့်အတွက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
လူမှုရေးတွေ့ဆုံလေးစားမှုနှင့်အတူဤ။ သာမာန်ခရီးသွားည့်သည်တစ်ယောက်အနေနှင့်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအကျွမ်းတဝင်အခြေအနေများကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်လေ့လာမှုသို့သွားပါကသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်သို့ဝင်ရောက်ပါကသူတို့နှင့်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ကိုရီးယားရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်။
ခဏကြာရင်တောင် ဒါပေမယ့်ကော ကိုရီးယားကဓလေ့ထုံးတမ်းများ? အစားအစာများသည်ကိုရီးယားဘ ၀ ၏အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးများတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
သတိရ မင်းကိုဖိတ်တဲ့သူနောက်မှာထိုင်ပါ။ အကယ်၍ ထိုသူကသင့်အားထိုင်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်ခိုင်းသည်ဆိုပါစို့၊ သင်သည်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဖြင့်အနည်းငယ်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်မည်မှာသေချာပါသည်။
အကယ်၍ ထိုသူသည်အသက်ကြီးလျှင်၊ အရင်ဆုံးလုပ်ရမည်။
ဂျပန်၌ရှိသကဲ့သို့, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရင်အစေမခံပါနဲ့။ လုပ်ရတာယဉ်ကျေးတဲ့အရာပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအတွက်အစေခံလေ့ရှိပြီးတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူကြပါ။
သငျသညျအပိုမသောက်ချင်လျှင်, ဖန်ခွက်၌အချို့သောသောက်စရာထားခဲ့ပါ။ အမြဲတမ်းအချည်းနှီးဖြစ်, တစ်စုံတစ် ဦး ကဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
အများအားဖြင့်သူတို့သည်စကားပြောစရာမလိုဘဲအစာစားခြင်းအတွက်သာမိမိတို့ကိုယ်ကိုရည်စူးကြသည်။ ဒါဟာမသက်မသာမဟုတ်ပါဘူး တခါတရံလူတိုင်းအနည်းငယ်စားသည့်အခါစကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းများစတင်သည်။
အစားအစာနှင့်သောက်ကိုလက်နှင့်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူလက်ခံရရှိကြသည်။
ကိုရီးယားတွေကအစာစားပြီးတာနဲ့ဘားတွေကိုကပ်ထားရမယ်။ guest ည့်သည်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းစိတ်ကူးကိုမငြင်းသင့်ဘူး။
ကိုရီးယားတွေကဘီယာတွေများများသောက်တယ် ထူးချွန်တန်းတူအမျိုးသားရေးသောက်သည် Sojuအရက် ၁၈ နှင့် ၂၅% အကြား၊ ပျော့ပြောင်းသော်လည်းဗော့ဒ်ကာနှင့်တူသောအဖြူရောင်သောက်စရာ။
ကျနော်တို့လူမှုရေးစုရုံးအတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းနှင့်ဘာလုပ်ရမှန်းပြီးသားသိ။ , ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားအကောက်ခွန်များအတွက်တားမြစ်ထားသောအရာဖြစ်ကြ၏? ကောင်းပြီ၊
အကယ်၍ သင်သည်တစ်ခုခုကိုရေးရန်သွားလျှင်၎င်းကိုမင်နီကိုမသုံးသင့်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သေမင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သောကြောင့် အကယ်၍ သင်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏နာမည်ကိုရေးပါကသူတို့သည်သေခြင်းကိုကိုယ်တိုင်လိုချင်ကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ယဉျကြေးမှု » တောင်ကိုရီးယားအကောက်ခွန်